Chii chinonzi ruzha rwevhavha? Mushure mekunge mota yatanga, injini inoita mutinhimira "watinya" wakafanana neruzha rwekugogodza kwesimbi, iyo inomhanyisa zvine mutsindo sezvo injini inomhanya. Mumamiriro ezvinhu akajairika, injini haizoite ruzha urwu kwenguva yakareba. Mazhinji e ...
Kubva pakauya injini, vanhu havana kumira kugadzirisa kwaari, uye takaonawo zvizvarwa zveinjini nyowani dzakatamiswa dzakasiyana kubva hukuru kusvika kudiki. Nekuwedzera kwemotokari, isu takaunza dambudziko rinotyisa remagetsi. , Oiri, isiri-inogadziriswazve sosi, inononoka ...
Maitiro Ekuita neValve Kukundikana?
Kana mudhudhudhu akatasva kwenguva yakareba, iyo vharuvhu yeinjini inowanzooneka, yakakura kwazvo kana diki kwazvo chiitiko, kuti uwane chikonzero, unofanirwa kubvunza ruzivo rwakawanda, mutengesi wevheji yemudhudhudhu kuti akupe ongororo yakapusa. Kufuridzira kwehurombo vharuvhu clearance painjini La ...
Zvemota zvikamu injini vharuvhu inoshandira nharaunda ine hukasha, yakanangana neiyo gasi, iyo yakanyanya tembiricha yevhavha yekuzadza inogona kusvika 800 ℃, uye pakupera kwekugadzirisa lubrication, pamwe nebasa revhavha kana iko kuvhura nekuvhara chiito kuri kazhinji, zvikamu zvevhavha zviri nyore kwazvo ...
Maitiro ekugadzirisa Midhudhudhu Injini Valve Kuchenesa?
Kana mudhudhudhu ukatasva kwenguva yakareba, injini inowanzove nemvumo yevhavha ingave yakanyanya kukura kana kuti diki, yakakura kwazvo kana diki kwazvo, yakakura kwazvo kana diki kwazvo. Vanhu vazhinji vanoziva zvakawanda nezvemavhavha vanogona kunge vasingazive izvo zvinogona kukonzereswa nematambudziko aya, uye neruzivo ...